Semalt Expert Manome Fanamarihana Mitady Fanadihadiana
Talohan'ny fampidirana ny tranonkala dia nisy fikarohana izay niasa voalohany tamin'ny fanampiana ireo mpampiasa aterineto hahitany ny fampahalalana mialoha ao amin'ny aterineto. Ny fandaharanasa efa misy toy ny "Archie" sy "Gopher" dia nanangona fampahalalana ary nitazona ny fampahalalana momba ny serasera izay mifandray amin'ny aterineto.
Michael Brown, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , dia mizara amin'ny lohahevitra sasantsasany izay mahasarika izay hanampy amin'ny fanentanana anao SEO.
Ny fomba fiasan'ny fikarohana
Miantehitra tanteraka amin'ny tranonkala mpikirakira ny raki-tranonkala mba haka ireo antontan-taratasy sy rakitra ao amin'ny tranonkala. Mitifitra ny fampiasana ny tranonkala rehetra hita ao amin'ny tranonkala sy manamboatra lisitr'ireo tahirin-kevitra sy fandaharana amin'ny alàlan'ny dingana iray antsoina hoe web crawling.
Ny mpamaky amin'ny aterineto dia manangona vaovao avy amin'ireo pejy malaza be mpampiasa sy ireo serivisy manana fifamoivoizana ambony. Amin'ny fitsidihana tranokalam-pantany iray dia manaraka ny rohy rehetra ao anaty tranonkala iray ny spiders ary mandrindra ny teny rehetra ao amin'ny pejiny.
Ny fahaterahan'ny Google Search Engine
Google dia iray amin'ireo fitaovam-pitadiavana ambony indrindra izay nanomboka ho sehatry ny oniversite. Raha araka ny famoahana izay natao tamin'ny fampivoarana an'i Google, dia nilaza i Lawrence Page sy Sergey Brin fa ny rafitra voalohany dia naorina mba hampiasa mpiserasera amin'ny aterineto roa na telo amin'ny fotoana iray. Ny mpiloka tsirairay dia novolavolaina mba hihazona ny fifandraisana 320 eo amin'ny pejy web izay mihazakazaka indray mandeha.
Google dia nandona ny lohatenin-tsarimihetsika tamin'ny fampiasana spider efatra, ary mety ho tapakila maherin'ny 99 pejy isan-tsegondra ny rafitr'izy ireo. Nandritra izany fotoana izany, dia nahatratra 600 kilaoy ny tatitra isan-tsegondra ny rafitra. Ny rafitra Google voalohany dia niasa tamin'ny famoahana URL sasantsasany tamin'ny spider web amin'ny alalan'ny server..Mba hampihenana ny fotoana farafahakeliny alohan'ny mpiserasera sy ny fandaharan'asa iray dia manana ny Domain Name Server (DNS) ny Google.
Raha nandinika sy nanadihady pejy HTML iray dia nanamarika ny isan'ny teny ao anaty pejy iray i Google, ary ny toerana misy ny teny. Ny teny taratra ao amin'ny meta sy ny dikanteny dia nomena laharam-pahamehana nandritra ny fikarohana nataon'ny mpisera. Ny spider Google dia novolavolaina mba hampisehoana ny teny manan-danja indrindra tsy misy ny lahatsoratra "ny,", "a" ary "ny". Na izany aza, ireo mpikirakira tranonkala hafa dia manao fomba hafa amin'ny fampidirana ireo teny manan-danja raha ampitahaina amin'ny Google.
Mba hampitombo ny traikefa fitadiavana, i Lycos dia nampiasa ny fomba fijerena ny fehezanteny tafiditra ao amin'ny tags etsy sy manamarika ny teny 100 ambony indrindra ampiasaina. Raha ny mikasika ny AltaVista, dia tsy mitovy ny fomba fiasa. Ny fizotry ny fizakan-teny dia mitaky ny teny rehetra misy ao anaty pejy iray, tsy lazaina intsony ny lahatsoratra "an", "a" ary "ny".
Ny fikarohana amin'ny hoavy
Araka ny hevitr'ireo mpiasan'ny Boolean, dia manara-maso ireo fehezanteny sy teny ireo motera rehefa misy mpampiasa azy. Ny fikarohana amin'ny literatiora izay miasa amin'ny fanafoanana ny fikarohana tsy mitady dia manampy amin'ny fitadiavana ny vokatra tsara indrindra amin'ny Internet. Ny fikarohana mifototra amin'ny hevitra dia tena manan-danja tokoa rehefa mikaroka vaovao. Ity fikarohana ity dia miasa amin'ny fampiasana fanadihadiana statistika amin'ny pejy ahitana ireo andian-teny izay tianao.
Ny fiantraikan'ny meta tags amin'ny fikarohana
Ny milalain'ny meta dia manana andraikitra lehibe amin'ny resaka marketing (content) . Ny tags Meta dia mamela ny tompon'ny tranonkala mamaritra ny fametahana ny teny sy ny andian-teny fampidiran-doko. Ny spiders dia mamaritra ny meta meta izay tsy mifandray amin'ny votoaty sy ny mifamadika. Ny lanjan'ny meta meta dia tsy azo sakanana. Izy ireo dia milalao anjara amin'ny famantarana ny fehezanteny marina mifandraika amin'ny fikarohana nataon'ny mpampiasa.
Ny fitaovan'ny fikarohana finday dia miasa amin'ny fampihenana ny fotoana takiana amin'ny mpitsidika amin'ny aterineto mba hahitana fandaharam-baiko sy solosaina. Taloha, nahazo fampahalalana sarobidy sy fandaharam-pampianarana avy amin'ny tranonkala ny tsy maintsy ho fantatrao hoe niasa i Veronica sy Archie. Ao amin'ny tontolo maoderina, maro amin'ireo mpampiasa aterineto no voafetra tanteraka amin'ny Internet, izay tena manan-danja izay nahatonga ny fampiroboroboana ny fitaovan'ny tranonkala Source .